» काठमाडौं महानगर बासीहरु कोहि पनि दुखी छैनन! -: मेयर विद्या सुन्दर शाक्य काठमाडौं महानगर बासीहरु कोहि पनि दुखी छैनन! -: मेयर विद्या सुन्दर शाक्य – हाम्रो खबर
काठमाडौं महानगर बासीहरु कोहि पनि दुखी छैनन! -: मेयर विद्या सुन्दर शाक्य
काठमाडौं,कार्तिक ३० । तिहारलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चको निशुल्क खाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि सयौँको संख्यामा गरिवहरु खुलामञ्चमा दैनिक पुगिरहेका छन् ।
अभियन्ताहरुले हामीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या लाग्छ भन्नुभएको छ । उहाँहरुले दुई गतेसम्मका लागि समय माग्नुभएको हो । त्यसपछि पनि काठमाडौंले पनि सहकार्य गर्छ । तर, खुलामञ्चमा भने खाना नखाउने निश्चित भइसकेको छ । हामीले राम्रो ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुस् भनेका छौँ । अनलाइन खबर बाट